Olee otú mmekọrịta iCloud Ndi ana-akpo ka Android
2 Mfe Ụzọ Nyefee iCloud Ndi ana-akpo ka Android
Ọ bụ nnọọ mfe okporo mmiri ihe gam akporo ngwaọrụ maka ihe iPhone, n'ihi na data transfer bụ nnọọ mfe. Ka ihe atụ, i nwere ike nyefee kọntaktị site na Android ka iPhone mfe. Otú ọ dị, mgbe ịmafe si iPhone ka Android, ọ bụghị na mfe na niile, n'ihi na data on iPhone a nọ na iPhone onwe ya, iTunes ma ọ bụ iCloud. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmekọrịta iCloud kọntaktị na Android ekwentị, ị ghaghị ịmụta ụfọdụ Atụmatụ na usoro. Ma, ị ga-ada iji nweta kọntaktị site na iCloud ka gam akporo. Agbanyeghị, echegbula! Ndị na-esonụ na-ewebata ị 2 kasị n'ọtụtụ ebe na ụzọ nyefee kọntaktị site na iCloud ka Android. Họrọ ụzọ nke ahụ dị mma n'ihi unu:
Ngwọta 1. Kpọmkwem Nyefee iCloud Ndi ana-akpo ka Android ekwentị mkpanaaka na (Kacha na kasị na ngwọta)
Ngwọta 2. Export iCloud Ndi ana-akpo> Bubata exported Ndi ana-akpo ka akporo ekwentị (More nzọụkwụ na-ewe ogologo oge Ijezu)
Cheta na: Ọ bụrụ na ị dị nnọọ ịgbanwee gaa na ọhụrụ ekwentị, i nwere ike inwe mmasị otú Mbido ọhụrụ gị na ekwentị, idetuo data si ochie ekwentị ọhụrụ ekwentị, na ihe na-eme ochie ekwentị. Ị nwere ike ego nkọwa ebe a >>
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe kọntaktị site na iCloud ka Android ngwaọrụ ozugbo, a ngwá ọrụ dị mkpa, n'ihi na e nweghị akwụkwọ ntuziaka ụzọ dị ime otú ahụ. Ebe a na ike na-atụ aro ngwá ọrụ bụ Wondershare MobileTrans, nke e mere maka ọrụ nyefee data fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla na-smartphones.
Wondershare MobileTrans - Mmekọrịta iCloud Ndi ana-akpo na Android
Kpọmkwem nyefee kọntaktị site na iCloud ka Android ntị na mbadamba;
Easy, mfe na ngwa ngwa, ọ dịghị data erasing n'oge na-ebufe usoro;
Ofụri Esịt dakọtara na ọ bụla Android ngwaọrụ na-agba ọsọ Android 4.2 na mgbe e mesịrị;
4 Mfe Nzọụkwụ ka mmekọrịta iCloud Ndi ana-akpo na Android ekwentị mkpanaaka na Kpọmkwem
Nzọụkwụ 1. Wụnye Wondershare MobileTrans
Pịa download button n'okpuru iji nweta Wondershare MobileTrans echichi ngwugwu na kọmputa gị. Mgbe wee soro ọkachamara iji wụnye na ẹkedori ya. Jiri gị Android ekwentị USB dijitalụ USB jikọọ ekwentị gị na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Sign na iCloud
Ke isi window nke MobileTrans, pịa green agba ebe - Weghachi si Backups. Wee pịa "iCloud". Na ọhụrụ popped elu window, na ị na-achọrọ banye na iCloud. Dị nnọọ pịnye ke gị iCloud akaụntụ. Echegbula onwe gị banyere nche nke gị iCloud akaụntụ. Wondershare Mgbe anakọta ọ bụla nke ozi nkeonwe gị. Ọ na-enyere gị aka ibudata iCloud ndabere faịlụ na e dere ihe kọntaktị gị mkpa.
Cheta na: tupu na-kwụpụ 2, ị kwesịrị ị na apụ jide n'aka na ị kwadoo kọntaktị gị si gị iOS ngwaọrụ iCloud (pịa Ntọala> iCloud> Ndabere>-enyere "iCloud ndabere" na enweta "Back Up Ugbu a,")
Nzọụkwụ 3. Download iCloud ndabere File
Mgbe egbu osisi na na iCloud akaụntụ, ị nwere ike ịhụ ihe niile nke gị ọhụrụ iCloud ndabere faịlụ na n'aka ekpe nke window. Họrọ onye na e dere niile kọntaktị ị chọrọ Detuo na Android ekwentị na abụọ-pịa ya. Mgbe a mara Pop elu, na-arịọ gị download nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, dị nnọọ pịa "Download" na-amalite nbudata usoro.
Nzọụkwụ 4. Nyefee Ndi ana-akpo si iCloud ka Android
Mgbe nbudata iCloud ndabere faịlụ, Wondershare MobileTrans ga-wepụ kọntaktị niile si iCloud ndabere faịlụ maka gị. Ị dị nnọọ mkpa ego na "Ndi ana-akpo" nhọrọ ke n'etiti window na pịa "Malite Copy". Ọ bụ ya!
Ngwọta 2. Export iCloud Ndi ana-akpo> Bubata exported Ndi ana-akpo ka akporo ekwentị (More mgbagwoju anya na-ewe ogologo oge Ijezu)
Ọ bụrụ na ị mara nke ọma banyere iCloud, ị ga-amarakwa na kọntaktsị na iCloud nwere ike exported dị ka a vCard faịlụ. Na vCard faịlụ nwere ike ibubata ọ bụla Android ngwaọrụ. Nke ahụ bụ otú ngwọta 2-abịa si: Export iCloud kọntaktị mbụ, mgbe ahụ mbubata kọntaktị na Android. Ka ịmụta otú e si eme ya.
Nzọụkwụ 1. mmekọrịta Ndi ana-akpo ka iCloud
Mbụ na nke kasị, jide n'aka na i synced kọntaktị na iCloud. Ọ bụrụ na, na-eso ntụziaka ka mmekọrịta kọntaktị site na iOS ngwaọrụ iCloud: pịa Ntọala> iCloud> gị banye iCloud akaụntụ> swipe "Ndi ana-akpo" Gbanye.
Nzọụkwụ 2. Export Ndi ana-akpo si iCloud dị ka a vCard File
Open www.icloud.com na ihe nchọgharị weebụ na kọmputa gị. Gị banye iCloud akaụntụ na pịa "Ndi ana-akpo". Na-achịkwa panel maka kọntaktị, e nwere obere gear icon na ala ekpe. Pịa ya na-ahọrọ "Export vCard" ibudata kọntaktị.
Nzọụkwụ 3. Import iCloud Ndi ana-akpo ka Android SD kaadị
Jikọọ gị android ekwentị gị na kọmputa site na eriri USB. Ya SD kaadị ga-ghọtara dị ka a mbanye site na kọmputa gị. Emeghe "My Computer" ma ọ bụ "Computer" ịhụ na imeghe ya. Idetuo na mado ndị dị vCard faịlụ ka ya.
Nzọụkwụ 4. Import iCloud Ndi ana-akpo ka Android Ngwaọrụ Ndi ana-akpo Book
Enweta na-emeghe Ndi ana-akpo ngwa gị Android ekwentị. Kpatụ menu icon ekpe ndị isi bọtịnụ na ị ga-esi a ndepụta. Họrọ "Import / Export" na-ahọrọ "Import si USB nchekwa". Site n'ime nke a, kọntaktị niile na vCard faịlụ a ga-depụtaghachiri gị ana-akpo akwụkwọ.
Ọzọ Isiokwu Ị nwere ike amasị banyere Android na iPhone
Android File Nyefee Software I Kwesịrị Ịmara
Copy Music si iTunes ka Android
Nyefee na Ndi ana-akpo si Sony ka iPhone
Top 7 ekwentị Nyefee Software
Nyefee ngwa site Android ka Android
Olee otú Download Adobe Reader maka Android
Top 6 Android File Manager na idebe ihe nile Files ọma haziri
> Resource> iCloud> otú nyefee iCloud Ndi ana-akpo ka Android